BBC Afaan Oromo – Local Insight - Page 3
Namoonni hokkora salaata Finfinneetiin shakkaman 76 to’atamuu mootummaan hime
May 3, 2022 BBC Afaan Oromoo
Motummaan Federaalaa namoota 76 kanneen adda durummaan hokkoraafi jeequmsa sirna salaata Finfinnee irratti hirmaatan to’annoo jala oolchuu beeksise. click here to read original article...
Pirezidantiin Keeniyaa Keeniyaattaan itti-aanaan isaanii aangoo akka gadhiisan gaafatan
Pirezidantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa itti aanaan isaanii Wiiliiyaam Ruutoon, filannoo Hagayya dhufu keessa gaggeeffamuu irratti wal dhabdee cimaan waan umameef, aangoo akka gadhiisaniif gaafatan. click here to read original article...
Meejar Janaraal Gabramadihiin Fiqaaduu (Waddi Naccoo) lubbuun isaanii tasa darbuun dhagahame
Lola Tigraayitti jalqabe hordofee hidhaa kan seenan Meejar Janaraal Gabramadihiin Fiqaaduu haala ammatti hin beekmaneen lubbuun isaanii darbeera. Ajajaan waraanaa kuni eenyu? click here to read original article...
Gaarummaa: ‘Namoota kaaniif gaarii yeroo raawwannu, sammuun keenya akka badhaafamettii lakkaa’a’
Nama sababa malee waan gaarii namaa godhu, akka gowwaa, laafaafi garraamii wayiitti yeroon itti ilaalamu baayyee jira. Tahus gaarummaan hariiroo namootaa waliin qabnuuf dhimma murteessaa dha. click here to read original article...
Odeessa suuraa: Kabajni ayyaana Iid al-Faxirii 1443ffaa Itoophiyaatti maal fakkaata?
Sooma Ramadaamaa ji'a tokkoof tureen booda, ayyaanni Iid al-Faxirii 1443ffaa addunyaa maratti kabajamaa jira. click here to read original article...
Salaata Iid al-Faxir Finfinnee irratti jeequmsi ka’ee akka ture poolisiin magaalattii ibse
Poolisiin magaa Finfinnee sagadni Iidii osoo hin gahiin dura naannoo dirree Masqalaatti kan argamu Muuziyeemii yaadannoo 'Qay Shibbir' jedhamutti 'namootni dhuunfaa jeequmsa kaasaniin qabeenya irra miidhaan gaheera'' jedhe. click here to read original article...
West Haam Yuunaayitid 1-2 Arsenaal: Arsenaal West Haamiin injifachuun sadarkaa 4ffaatti deebi’e
Leenjisaan Arsenaal Maayikil Artettaan injifannoon Arsenaal West Haam irratti istaadiyeemii London irratti galmeesse kun mallattoo garee guddaati jedhe. click here to read original article...
Suuraaleen: Qilleensi Iraaq maaliif akkanaan burtukaana fakkaate?
Dhukkeen qilleensa cimaan biyya Iraanitti ka'e samii magaalota biyyattii gara caalu burtukaana fakkesseera. click here to read original article...
Daandiin qilleensaa Qantas osoo hin qubatiin balaliinsa sa’aatii 20 eegaluufan jedhe
Daandiin qilleensaa Awustiraaliyaa balaliinsa isaa haaraadhaan osoo bakka biraa hin qubatiin kallattiin magaalaa Addunyaa kamuu qubachuu akka danda'u beeksiise. click here to read original article...
US sirreeffamaa balaafamaafi eegduu mana sirreessaa waliin miliqan adamsaa jirti
Poolisiin Ameerikaa sirreefamaa murteen du'aa eegatuu fi eegduu mana sirreessaa isa waliin miliqxe adamsaa jiraachu beeksiise. click here to read original article...
Biyyootii guddatanitti manatti da’uun maaliif deebi’ee baayyachaa jira?
Pirof Mitikkuu Haayila – Saayintistii kaniin baradhu qonnaan bulaarraati jedhan
የረሃብ ስጋት በኢትዮጵያ
June 24, 2022 DW´s Amharic News